Ururka Badbaado oo oo shegay inuu kasoo horjeedo mudaharaad la sameeyo | FooreNews
Home wararka Ururka Badbaado oo oo shegay inuu kasoo horjeedo mudaharaad la sameeyo
Ururka Badbaado oo oo shegay inuu kasoo horjeedo mudaharaad la sameeyo
fooreApr 22, 2012wararka0
Hargeysa (Foore) Ururka Badbaado oo ka mid ah sagaalka urur ee ku guul daraystay inay ka mid noqdan ururada u tartarami doona xisbinimada ayaa shegay inuu kasoo horjeedo mudaharaad lagu sameeyo natiijaadii gudida diiwan gelinta ururada. Qaar ka mid ah hogaanka Sagaalka urur ee guddida diiwan gelintu sheegtay inay ku hadheen tartankii ururada ayaa hore u sheegay inay dhamaan sagaalka urur ku heshiiyen inay mudaharaad salmi ah ka dhigi doonan lixda gobo lee dalka.
Guddoomiyaha Urur Siyaasadeedka Badbaado Maxamed cali Geedi oo caawa Warbaahinta ka hadlay ayaa sheegay inay Urur ahaan ka soo horjeedaan Go’aanka Guddida Diiwaangelinta hase yeeshee aanay ku waafaqsanayn Ururada kale qaabka ay u marayaan cabashada go’aankaas. Isla markaana waxa uu guddoomiyahu sheegay inay cabashadooda u mari doonan wadada sharciga ah oo ay dacwad ka qaadan doonan arrinkaas.
Isaga oo ka hadlaya mudaharadyadaas ay sheegeen qaar ka mid ah ururadu inay abaabulayan, Guddomiye Maxamed Cali geedi, waxa uu uga digay taageeryaashiisa inaanay ka qayb qaadan mudaharadkaas, isaga oo xusay inay muhiim tahay in la maro oo la dhawro nidaamka saxa ah ee sharci.
Previous PostWasiirka Daakhiliga oo si adag ugu hanjabay in Talaabo laga qaadi doono ururada ammaanka waxyeelaya Next PostMadaxweyne Siilaanyo oo Qaabilay Augustina Mahiga